‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ बढ्यो सरकारको कदम, जलविद्युत कम्पनी स्थापना ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > उर्जा > ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ बढ्यो सरकारको कदम, जलविद्युत कम्पनी स्थापना !
काठमाण्डौं । सरकारले नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न दिने व्यवस्थासहित विधिवत् रुपमा जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना गरेको छ । कम्पनी दर्ता भएसँगै नेपाली जनतालाई आफ्नो क्षमताअनुसार तोकिएका जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नाराका साथ ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको ३७ बुँदे कार्ययोजनाका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले आइतबार कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा उक्त कम्पनी दर्ता गरेको हो । मन्त्रालयले रु ६१ लाख ६० हजार दर्ता शुल्क तिरेर कम्पनी दर्ता गरेको हो ।
जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीमा नेपाली नागरिकले २७ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने भएका छन् । कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु २० अर्ब र चुक्ता पुँजी रु दुई अर्ब रहेको छ ।
६ मंसिर २०७३, ४।३०
२०७३ मंशिर ६ गते १६:४९ मा प्रकाशित
सेयरबजारमा छायो हरियाली : हिजो आहत भएका लगानीकर्तामा आज मिल्यो राहत !
महिलालाई उभिएर पिसाब फेर्नेसम्बन्धी तालिम दिईने !
उच्च अदालतमा १५ न्यायाधीश सिफारिस (नामसहित)
कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना बन्द !
क–कसले आजै पाउँदै हुनुहुन्छ ४२% बोनस,पढ्नुहोस्